Ikhabhinethi yokuLokha eQonxiweyo yesandla yakudala
Yiza uphumle kwindawo eya kuthi ikubuyisele emva kwiintsuku zobuvulindlela zookhokho bethu ngalo lonke ixesha ekubonelela ngezinto eziluncedo zanamhlanje. Ikhabhinethi yethu ibekwe kumqolo ongasemva kwifama yethu apho ekuphela kwezibane kunye nezandi ziyindalo yomama.
Le ndlu ibikwiNtsapho yethu ukusukela oko ookhokho bethu bahlala apha emazantsi eentaba ze-Appalachian ekuqaleni kweminyaka yoo-1800. Ngo-2008 sayisusa ikhabhathi kwaye sayiphucula ngelixa sigcina umtsalane weKhabhinethi ye-Classic Hand Hewn Log.
Ukukwazi ukudlula kwindawo apho uya kuziva ukuba akukho mntu wumbi emhlabeni wohlukile kakhulu. Ukuhlala kwiveranda enkulu kunye nokuphinda uqhagamshele kwindawo yakho engaphakathi kuyaphumla kakhulu ngelixa ucinga ngabo bangoovulindlela bomoya omkhulu waseMelika baya kukunika imbono entsha ngehlabathi. Ukuhlala kwindawo eye yamelana novavanyo lwexesha kunye notshintsho oluncinci kakhulu ngelixa ilizwe litshintshile ngokumangalisayo ukusukela oko izandla zidityanisiwe kukodwa kwaye kuyakhuthaza ngokwenene.
Siyakonwabela ukuhlala ecaleni komlilo wenkampu kwaye sincokola neendwendwe zethu. Siziva sisikelelwe kakhulu ngokuba nefama yethu kunye nezinto eziluncedo esinokubelana ngazo nabanye abanokuthi ngenye indlela bangakwazi ukufikelela kwindawo elolo hlobo. Ikhethekile ngokwenene.
Siyakonwabela ukuhlala ecaleni komlilo wenkampu kwaye sincokola neendwendwe zethu. Siziva sisikelelwe kakhulu ngokuba nefama yethu kunye nezinto eziluncedo esinokubelana ngazo naba…